February 8, 2020 - Myitter
” ပလတ်စတစ်တွေကို သင်္ကန်း ၀တ်ရုံတွေအဖြစ် ဖန်တီးနေတဲ့ ထိုင်းဘုန်းကြီးကျောင်း ”….
February 8, 2020 Myitter 0
Zawgyi ဘန်ကောက်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်းက ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ ဦးဇင်းတစ်ပါးဟာ ပလတ်စတစ်ရေဘူးတွေကို ထောင်နဲ့ချီပြီး ကြိတ်ချေနေတဲ့ စက်ကြီးကို ကြည့်ရှုနေပါတယ်။ မကြာခင်မှာပဲ စက်ကြီးထဲကနေ ဖိကြိတ်လုံးချေထားတဲ့ ပလတ်စတစ်အထုပ်ကြီးဟာ ဘုတ်ကနဲမြည်သံနဲ့အတူ အပြင်ကို ထွက်လာပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီပလတ်စတစ်တွေကို ပိုလီအက်စတာမျှင်တွေ ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီး သံဃာတွေရုံတဲ့ ရွှေဝါရောင်သင်္ကန်းဝတ်ရုံတွေအဖြစ် ပြန်လည်ဖန်တီးမှာ […]
ထိုင်းနိုင်ငံက အကြမ်းဖက်တပ်ကြပ်ရဲ့ နောက်ဆုံးသတင်း
ထိုင်းနိုင်ငံက အကြမ်းဖက်တပ်ကြပ်ရဲ့ နောက်ဆုံးသတင်း Breaking news on February 8,2020 ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း နကော်ရစီမား ခရိုင် ကိုရ မြို့ ကုန်တိုက်ကြီး အောက်ထပ် Food land စားသောက်ဆိုင်ခန်းမ မှာ ပြည်သူ ၁၆ ဦးကို ဓါးစာခံလုပ် ထားသူ […]
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ထိုင်းစစ်သားတပ်ကြပ်ကြီးတစ်ဦးမှ သေနတ်နှင့်ဗုံးများကို ကိုင်ဆောင်ထားပြီး တွေ့သမျှသူများကို ပစ်ခတ်မှု …
zawgyi Breaking_News ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ထိုင်းစစ်သားတပ်ကြပ်ကြီးတစ်ဦးမှ သေနတ်နှင့်ဗုံးများကို ကိုင်ဆောင်ထားပြီး တွေ့သမျှသူများကို ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့အပါအဝင် (၁၄) ဦးထက်မနည်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိလျက်ရှိကြောင်း ကနဦး သိရှိရသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ နခွန်ရတ်စီမာမြို့ တာမီနယ် ၂၁ ကုန်တိုက်ကို ပိတ်လိုက်ပြီး ပြည်သူတွေအပြင်မထွက်ဖို့ ကြေညာလိုက်ပါပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သေနတ်နဲ […]
” ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီး ရောင်ချည်တော် ကွန့်မြူးပါတယ် ”…..
မနေ့ညက ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီး ရောင်ချည်တော် ကွန့်မြူးပါတယ်၊2020မှာမြန်မာပြည်ကြီးအတွက် အေးချမ်းတဲ့ အောင်အတိတ် အောင်နမိတ်ပါ ဘုရားလေးဆူတို့၏ မွေတော် ဓာတ်တော်များ ဌာပနာရာ စေတီတော်မြတ်ကြီး ဖြစ်သောကြောင့် လေးဆူ ဓာတ်ပုံ ရွှေတိဂုံ စေတီတော်မြတ်ကြီးဟူ၍ ခေါ်ဝေါ်ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အမြင့်ဆုံး ဘုရားစေတီမှာ ၃၂၆-ပေ ရှိသော ရွှေတိဂုံ စေတီတော်ပင်ဖြစ်ပြီး […]
ဒဂုံအရှေ့က မြေကွက်တစ်ကွက် ခြံစည်းရိုးခက်ဖို့ မြေကြီးတူးမယ့်သူရှာခိုင်းလိုက်သော်အခါ…
ဒဂုံအရှေ့က မြေကွက်တစ်ကွက် ခြံစည်းရိုးခက်ဖို့ မြေကြီးတူးစရာရှိတာနဲ့ မြေကြီးတူးမယ့်သူရှာခိုင်းလိုက်တယ် တပည့်ကျော်က ပုတ်ပြတ်တူးပေးမယ့်လူရှိတယ် ခိုင်းမလားဆိုတော့ လုပ်ကွာဆိုပြီးပြောခဲ့တာ ဒီနေ့မနက်သွားမှ ခါတိုင်းလို ယောကျာင်္း၃ယောက် ၄ယောက်လောက် တူးမယ်ထင်နေတာ ဆရာမကြီးက တစ်ယောက်တည်းချနေတာ ဆရာမကြီးနာမည်က ဒေါ်ဌေးဌေးဝင်း သန်မာချက်ကတော့ လန်ထွက်နေတာနော် ကြောက်စရာကြီး ယောကျာ်းကဆုံးသွားပြီ မြေကြီးတူးစရာရှိရင်တူးတယ် မရှိရင် ထင်းခွဲရောင်းစားတယ် […]
မော်လမြိုင် ဖက်တန်း ဒေါင်းမင်းရပ်(ဃ)လမ်း အမှတ်(၅၈)နေအသက်(၁၁)နှစ်အရွယ်(၅)တန်းကျောင်းသားလေးပျောက်နေလို့ပါ …..
မော်လမြိုင် ဖက်တန်း ဒေါင်းမင်းရပ်(ဃ)လမ်း အမှတ်(၅၈)နေအသက်(၁၁)နှစ်အရွယ်(၅)တန်းကျောင်းသားလေးပျောက်နေလို့ပါ ယနေ့ နံနက်(8:00)ခန့်က နေအိမ်မှ မုန့်ဝယ်စားမည်ဟုဆိုကာမုန့်ဖိုးယူပြီး ထွက်သွားပြီးကတည်းက ယခုချိန်ထိ ပြန်မရောက်ပါ။ဆွေမျိုးအိမ်များ လိုက်ရှာနေသည်မှာလည်း စုံနေပါပြီး။ ယခုချိန်ထိရှာဖွေ၍ မတွေ့ပါ။ ကလေးနာမည်က – မောင်ဇင်မင်းခန့် အသက် (၁၁)နှစ် (၅)တန်း ရဲဘော်ကုန်းရပ် အမှတ်(၄) ကပါ။ (ဘ)ဦးနီရှား […]
ဒီနေ့ အသီးကောက်ထွက်ရကျိူးနပ်တော့ ပျော်တယ်ဗျာ ကုက္ကိုသီးတွေ တော်တော်များများရခဲ့တယ်
ဒီနေ့ အသီးကောက်ထွက်ရကျိူးနပ်တော့ ပျော်တယ်ဗျာ ကုက္ကိုသီးတွေ တော်တော်များများရခဲ့တယ် အားတဲ့နေ့တိုင်း ဆိုင်ကယ်တစ်စီး အိတ်တစ်လုံးနဲ့ အသီးကောက်ထွက်နေတာ ကြာပြီ အခုဆို ခရေစေ့တွေ အတော်များပြီ ထနောင်းစေ့တွေလည်း နည်းနည်းရထားတယ် ဒီရက်ပိုင်းခရေသီးကောက်တာခဏရပ်ထားပြီး ကုက္ကိုသီးတွေလိုက်ကောက်နေတယ် ဒီနေ့ ကန်တော်ကြီးပတ်လည်မှာ အများကြီးပဲရခဲ့တယ် အခုကတည်းက စုထားတယ် မိုးရာသီအတွက်ပေါ့ ခရီးသွားရင် ဗူးထဲထည့်ယူသွားမယ် […]
အမှတ် ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ဘရာဇီးဖိုက်တာကို အနိုင်ယူအပြီးမှာ အောင်လအန်ဆန်ကို စင်ပေါ်ကနေ တိုက်ရိုက် စိန်ခေါ်လိုက်တာပါ ….
မနေ့က ဂျာကာတာမှာ ထိုးသတ်ခဲ့တဲ့ ONE Championship – Warrior’s Code ပြိုင်ပွဲမှာ နယ်သာလန် နိုင်ငံသား ဖိုက်တာ Reinier De Ridder က ဘရာဇီး ဖိုက်တာ Leandro Ataides ကို အနိုင်ယူကာ အောင်လအန်ဆန်ရဲ့ မစ်ဒယ်ဝိတ်ခါးပတ်ကို စိန်ခေါ်ခွင့်ရရှိခဲ့တယ်လို့ […]
ဗဟန်းမြို့နယ် Fashion ဆိုင်တစ်ဆိုင် အတွင်းသို့ mask တပ်ထားသည့် အမျိုးသားတစ်ဦးမှ ဝင်ရောက်ပြီး ဓားပြခြိမ်းခြောက်ကာ ငွေများလုယက်မှုဖြစ်ပွား …..
ဗဟန်းမြို့နယ် ရေခဲဆိုင်မှတ်တိုင်အနီးရှိ Fashion ဆိုင်တစ်ဆိုင်အတွင်းသို့ mask တပ်ထားသည့် အမျိုးသားတစ်ဦးမှ ဝင်ရောက်ပြီး ဓားကိုင်ခြိမ်းခြောက်ကာ ငွေများလုယက်မှု ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက် ညပိုင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက်၊ ည ၇ နာရီခွဲကျော်ခန့်တွင် ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ရေခဲဆိုင်မှတ်တိုင်အနီးရှိ The […]